Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta xarigga ka jaray waddo aad muhiim u ah (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta xarigga ka jaray waddo aad muhiim u ah (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta furay wado laami ah oo maamulka gobolka Banaadir uu dib u dayactir ku sameeyey, taasoo loogu magac daray Dr. Xuseen Sheekh Axmed (Kadare) oo ka mid ahaa aqoonyahanada udub dhexaadka u ahaa dhaqanka iyo afka Soomaaliga.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka hadlay munaasabada xarig jarka wadadan ayaa xusay in kharashka lagu dhisay wadadan ay iska soo uruuriyeen maamulka gobolka iyo ganacsatada gobolka Banaadir.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa si gaar ah ugu mahad-celiyay maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee gartay inay jeebkooda ka dhisaan qeybo ka mid ah dalka, ayna tahay wax lagu faano in dadka Soomaaliyeed oo is kaashanaya ay dib u dhistaan goobihii ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay.
“Waxaan isugu nimid inaan furno maanta wado ay dhisteen oo furteen shacabka Soomaaaliyeed, kharshadkoodana ay iyagu bixiyeen, qiimo gaar ah ayay noo leedahay, waxayna muujineysaa in shacabku garteen in aysan jirin cid u maqan oo ay isku haleeyaan, balse ay iyagu gacmaha is qabsadaan dibna u dhistaan dalkooda” Ayuu yiri ra’iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasadaasi.
Dr. Xuseen Sheekh Axmad Kadare ayaa ka mid ahaa aqoonyahanadii dalka soo maray, wuxuu caan ku ahaa suugaanta, horumarinta afka Soomaaliga, cilmi baarista dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed.